Puntland Oo Muujisay In Ay Sirdoon Ahaan Fashilantay | Hangool News
Puntland Oo Muujisay In Ay Sirdoon Ahaan Fashilantay
Hangoolnews:- Madaxwaynaha maamulka Puntland Cabdi Weli Maxamed Cali Gaas ayaa shalay xilka ka qaaday agaasimeyaasha hay’addaha nabadgelyadda ee PSS & PIA – sida lagu sheegay wareegto ka soo abxday xafiiska madaxwaynaha.
Cabdiweli Gaas ayaa u muuqda hadda mid muujiyey in maamulkiis u uu ku fashilmay saraakiisha sirdoonka ah ee uu dirtay. Labada masuul ee xilka laga qaaday ayaa kala ahaa Cabdirisaaq Ciise iyo Cabdullaahi Aadan Maxamed.
Wararku waxa ay sheegayaan in ha’yaddaha sirdoonka maamulka Puntland ay in muddo ahba hawl gab ahaayeen kaddib markii sida xogaha gaarka ah ay sheegayaan ay waayeen miisaaniyaddii ay ku hawl geli lahayeen.
“Xil ka qaasita madaxdan waxba soo kordhin maayaan, maadama ay howl gab ahaayeen ha’yaddahani afartii sanno ee la soo dhaafay” Sidaaas waxa yidhi sarkaal ka tirsanaan jirey ha’yaddahan.
Ugu danbeyntiina deeganada maamulka Puntland ayaanay ka hawl gelin wax sirdoon ah marka la eego falalka argagixisnimo ee halkaasi ka dhaca.